China Biyomass Pellet Machine iyo alaab-qeybiyeyaasha |Kingoro
Biyomass Pellet Machinery
45Kw (0.5-0.7t / saac)
Quudi Mashiinnada Pellet
Mashiinka Xirmooyinka Pellet
Isku-dhafka Shaft Double
Burburinta Boodhka garaaca
mashiinka bariiska qolof bariis
Biyomass Pellet Machine
Taleefanka: +86 13953111589
Cinwaanka: No.666 Waddada Fengnian, Magaalada Jinan, Gobolka Shandong, Shiinaha
Line Production Pellet
● Magaca Alaabta:Mashiinka Pellet Biomass Naqshad Cusub
● Nooca:Ring Die
● Qaabka: 470/560/580/600/660/700/760/850/860
● Awoodda: 55/90/110/132/160/220kw
● Awoodda: 0.7-1.0/1.0-1.5/1.5-2.0/1.5-2.5/2.5-3.5t/s
● Kaaliyaha: Gaadhi-qaadiyaha, boodhka ururiyaha, Golaha Xukuumadda ee Xakamaynta Korantada
● Cabbirka Pellet:6-12mm
● Miisaanka: 3.6t-13t
Hal-Stop Adeeg ee Qalabka Biyomass Pellet
Waxaan bixinaa xariiqda wax soo saarka biomass pellet oo dhan.Mashiinka pellet alwaax, Mashiinka pellet caws, Mashiinka pellet alfalfa, mashiinka pellet quudinta xoolaha, granulator bacriminta organic, iyo sidoo kale burburin jirrid, chipper alwaax, dubbe shiidi, qalajiyaha rotary, mixer, wiish baaldi, conveyors suunka iyo countercurrent qaboojiyaha ayaa ah alaabta ugu muhiimsan ee aan soo saarno.
Mashiinka pellet SZLH660 waa naqshadeenii ugu dambeysay ee giraanta tooska ah ee mashiinka dhinta pellet. Iyadoo 132kw motor, awoodda mashiinka waa 1.5-2.0t / h iyo mararka qaarkood waxay gaari kartaa 2.5t / h. Sababtoo ah waxqabadkeeda wanaagsan, waa mid aad caan u ah suuqa
qolof bariiska, caws, qolof abuur gabbaldayaha, qolof lawska iyo qolof kale oo qaraha;Laamaha, jirridda, jilif, bamboo, iyo qashinka kale ee alwaax; Dhammaan noocyada caws dalagga, caag, sibidhka, Slag cawl iyo alaabta ceeriin kiimikaad kale, iwm.
24 Saacadood Adeega khadka.
Adeegga raadraaca jidka oo dhan oo la bixiyo laga bilaabo dalbashada ilaa bixinta.
Tababar bilaash ah oo loogu talagalay hawlgalka, ciribtirka iyo dayactirka maalinlaha ah.
Waxaan bixin karnaa rakibaadda hagaha xirfadleyda.
Hal sano oo dammaanad ah iyo adeegga iibka ka dib oo dhan.
Naqshad la habeeyey iyo shaxda socodka ayaa diyaar u ah macaamiisheena.
Kooxda R&D ee madaxa banaan iyo nidaamka maamulka adag & sayniska.
Hore: Farsamaynta Burburiyaha
Xiga: Line Production Pellet
Biyomass Wood Pellet Machine
Biyomass Wood Pellet Mill
Hordhaca Ring Die of Bariiska Bariiska Mac...
Su'aalo iyo jawaabo ku saabsan qolof bariis ah...
Mashiinka qolofta bariiska ， Mashiinka pellet biomass ， Mashiinka pellet alwaax, khadka wax soo saarka pellet
Fadlan buuxi goobta loo baahan yahay